Xiddig Kooxda Real Madrid kula guuleystay horyaalka La Liga oo Guri ka iibsaday Magaalada London – Gool FM
(London) 22 Luulyo 2020. Waxaa Magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska lagu soo bandhigay guri uu iibsaday mid ka mid ah xiddigaha Kooxda Real Madrid kua guleystay horyaalka La Ligaha Spain, kaasoo la la xiriirinayo inuu ku biiri doono mid ka mid ah kooxaha ka dheela horyaalka Premier League.
Shalay oo Talaado ahayd ayaa gurigaan la soo bandhigay waxaana iibsaday Goolhaye Alphonse Areola oo amaah kula joogay Real Madrid xilli ciyaareedkan, waxaana markii uu dhammaaday horyaalku uu u safray caasimadda Ingiiriska, halkaasoo isaga iyo xaaskiisu ay sawir ku soo galeen guri cusub oo ay iibsadeen, kaas oo uu ku sheegay inuu yahay riyadoodii oo rumowday.
Waxa ay tahay in Goolhayahan uu ku laabto PSG, maadaama heshiiskiisa uu ka harsan yahay labo sanadood oo kale, laakiin laacibkan ayaa shaaca ka qaaday in riyadiisii ahayd inuu ku guri ka iibsado Magaalada London ay u rumowday isaga iyo xaaskiisa.
Alphonse Areola ayaa barahiisa bulshada soo dhigay sawir ay guri hortaagan yihiin isaga, xaaskiisa iyo carruurtiisa, waxaana uu soo raaciyey qoraal uu ku caddeeyey inay gurigaan ka iibsadeen Magaalada London.
“Sannado yar ka hor, riyadayadu waxay ahayd in gurigayagu noqdo London, riyadayadu way rumowday” ayuu u dhignaa qoraalka Areola.
Goolhaye Alphonse Areola ayaa ogaaday in Real Madrid iyo PSG uusan midkoodna boos joogto ah ka helayn, waxaana uu doonayaa inuu ku biiro koox cusub oo uu goolhayaha koowaad ka noqon karo.
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ka mid ah kooxaha ka dheela horyaalka Premier League, waxaana Lampard la sheegayaa inuu ka niyadjabsan yahay goolhayaha koowaad ee Kepa.
Halyeey Kooxda Chelsea ah oo codsaday inaan la iibin N'Golo Kanté